Maitiro Ekuchengeta Google Mifananidzo pane Android ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro Eku Backup Google Mifananidzo pane Android
Maitiro Eku Backup Google Mifananidzo pane Android, Google Mifananidzo ndeimwe yemasevhisi makuru eBig G system.
Sevazhinji venyu munoziva, izvi hazvisi zvekungotaridza mifananidzo; Basa rayo guru nderekushandisa chishandiso chemifananidzo nemavhidhiyo.
Munguva pfupi yapfuura, iyo kambani yeMuntain View yaunza zvigadzirwa zvitsva mune izvi, izvo zvinoita kuti musoro wenyaya backups zvakati wandei zvakanyanya. Hapana chakakosha, hongu, asi kana iwe uchida kuve neakajeka mazano ekuti ungawana sei zvakawanda kubva mairi, titevere isu mune yedu-yakadzika ongororo. Asi kwete kuzotaura uye ngatitsvakei pamwe kuti nei zvichigona kubatsira kuishandisa, mashandiro ayo uye ndeapi misiyano mikuru inosiyanisa yemahara uye yakabhadharwa vhezheni.
Negadziriro yeparutivi Google Mifananidzo pane Android Chii icho uye chii chiri cheichi?
Google Photos ibasa rinovakirwa pamusoro pegore, nzvimbo iyo yedu negadziriro yeparutivi mapikicha uye mavhidhiyo; ndizvo zvose.
Muchidimbu, hapana chinogona kuve chakareruka, dai zvisiri izvo zvekuti panogona kuve nemusiyano wakakura pakati penyaya imwe neimwe. Isu tinobata neizvi gare gare; Panguva ino, ngatione kuti ndeyei uye nei tichifanira kuishandisa.
Chekutanga pane zvese, ingo funga kuti iyo Google Mifananidzo backup inotibvumidza kuchengetedza ndangariro yeiyo smartphone vakasununguka yemifananidzo yakatorwa uye mavhidhiyo akarekodwa, chinonyanya kukosha kune avo vane chishandiso chekare kana avo vanorekodha huwandu hwakawanda hwezvakadai.
Chechipiri, thanks to Google Mifananidzo uye ayo ekuchengetedza maficha Izvo zvinokwanisika kuve uine padhuze gallery neese mapikicha akatorwa kubva pawakashandisa sevhisi, neiyo imwe kana anopfuura ma Smartphones echokwadi. Izvo mukushandura zvinoreva kuti kuonekana nekuchinjika kwedata kubva pane chimwe chinhu kuenda pane chimwe, icho kune avo vanowanzo shandura mafoni kunetsekana mune zvishoma kana zvishoma.
Yechitatu uye yekupedzisira yakakosha node inoreva kuwanikwa kwemifananidzo yakadzvanywa, iyo mifananidzo yakaiswa paGoogle server inowanikwa kwese kwese uye yakatemwa kubva kune chero chishandiso sezvataurwa. Simply pinda muakaundi yako yeGoogle Mifananidzo kuti uwane yako yemifananidzo gallery inosvika kubva paruoko rwako, pane yako smartphone, Hwendefa, PC kana pane chero Smart TV ine Android TV yakaiswa, semuenzaniso.
Mashandiro anoita Google Mifananidzo
Para shandisa Google Photoehe, unofanirwa kuve ne Google uye pinda mukati nemazita ako, kubva kune smartphone, piritsi kana komputa. Kana izvi zvangoitwa tinogona kunakidzwa nemabasa ese e Google Mifananidzo backup, kana kanenge, nekuti inofanirwa kusimbiswa ipapo kuti Mountain View yafunga zvakanaka zvekugovanisa sevhisi yekuchengetedza mumhando nhatu huru:
Yakakwira mhando, Yekutanga mhando uye Backup Express., Imwe yeazvino ekuwedzera zvinowedzerwa.
Ngatiisei kupatsanurana padivi kwekanguva kuti ndikuratidze mashandiro acho. Chaizvoizvo kamwe wakapinda mukati mekushandisa, isu tichazviwana tiri pamberi pechikuva icho, pamusoro pekutiratidza mafoto akatoiswa kare, anotikoka isu upload mifananidzo mitsva, kusunungura ndangariro uye kugona kuve nemifananidzo yese. Munzvimbo imwe chete. Mifananidzo yakatorwa nemidziyo yakawanda yakabatana neakaundi imwechete.
Ngatitorei Anwendung Android smartphones, semuenzaniso, uye ngatione pamwe chete mashandiro anoita Google Mifananidzo. Chokutanga pane zvose, tinowana chinyorwa chikuru icho inonyora ese akaiswa mafoto uye mavhidhiyo maererano nenguva uye ine bhaa repasi rine zvikamu zvikuru.
Sekufunga kwedu, ndiwo musoro weiyo backup, zvinodikanwa kuti uende kumenyu inodonhedza, iyo scroll menyu inoonekwa kuruboshwe. Pano tinowana sarudzo huru dzatinofanira kuita gadzirisa Google Photos sync. Pakati peizvi tinowana, semuenzaniso, "Mahara nzvimbo", basa rinokutendera kuti ubvise mifananidzo yese nemavhidhiyo atoiswa kare ku Akaundi yeGoogle, nekudaro ichisunungura yemukati yekuchengetedza nzvimbo.
Kana iri saizi yemutoro, nzvimbo yekuchengetera uye nezvimwe, isu tichataura nezvazvo pazasi.
Marii yeGoogle Mifananidzo inodhura uye mutsauko pakati peiyo yemahara uye yakabhadharwa vhezheni
Sezvakatarisirwa, iyo Google Mifananidzo backup rakakamurwa kuita sarudzo dzinoverengeka. Iko kune mukana wekuishandisa zvese mune yakabhadharwa vhezheni uye mune yemahara vhezheni, iyo zviri pachena ine zvimwe zvimwe zvisingakwanisike.
La yemahara backup yeGoogle Mifananidzo, inozivikanwa zvakare se "mhando yepamusoro", inokutendera kuti uve ne risingagumi nzvimbo yekuchengetera uye kurodha mifananidzo yakadzvanywa, Mifananidzo isina kudzoreredzwa kusvika pakugadziriswa kwakanyanya kwema 16 megapixels. Mamiriro ezvinhu akafanana anoshanda kumavhidhiyo ayo, kupfuura resolution ye1080p, anozochinja muhukuru, pamwe nekurasikirwa kweruzivo (kusanganisira zvinyorwa zvidiki mune zvimwe zviitiko).
Imwe yazvino zvigadzirwa ndeye Negadziriro yeparutivi Express, zvakare yemahara sarudzo iyo inobvumidza vashandisi ve Google Photos tora mukana wekukurumidza kusevha sevhisi isina muganho yemahara yekuchengetedza nzvimbo. Mutengo wekubhadhara ndiko kuchinjazve kwemifananidzo nemavhidhiyo: ekutanga akaiswa pa3 megapixels, mavhidhiyo ari pa480p.
Zvese izvi hazviitike ne Mifananidzo yeGoogle yakabhadhara backup mu «Hwemhando yepamusoro» iyo inopa vashandisi mukana wekubatsirwa kubva kune a yakaringana nzvimbo yekuchengetera uye kugona kuisa mapikicha nemavhidhiyo mune imwecheteyo mhando umo dzavakawanikwa.
Kuti utore mukana werudzi urwu rwekuchengetwa kwakabhadharwa, unofanirwa kukwidziridza kuGoogle One nechimwe chezvirongwa zvakasiyana zviripo. Pano iwe unowana zvese zvaunoda kuti uwane pfungwa yemitengo uye akasiyana mapakeji: kubva ku100 GB yenzvimbo yekuchengetera pa1,99 euros pamwedzi (19,99 pagore) kusvika ku30 TB pamutengo we299,99 euros pamwedzi pakati pezvakawanda. sarudzo dzepakati, hongu.
Kuwanika uye zvishandiso zvinoenderana
La Google Map backup inowirirana nechero ipi smartphone yemusika, hazvina basa kana iri Android kana iPhone. Izvo zvinoenda pamapiritsi kana maPC, kuburikidza nemabhurawuza, ehe saizvozvo.
Muchidimbu, sevhisi inobatsira, yakapararira, asi pamwe isingashandiswi nevazhinji vashandisi. Asi tizivisei mubhokisi remashoko zvaunofunga uye nemashandisiro aunozviita.
Chii chinonzi Google One uye chinoshanda sei, kuwana nzvimbo pane yako Android